Mashiinnada barafka tuubbada ee ugu fiican Shiinaha
Shaki kuma jiro in tiknoolajiyada mashiinka barafka tuubada ay ka timid Vogt USA, waxayna sameysaa mashiinada barafka tuubbada ugu fiican. Muddo dheer, Vogt wuxuu xukumaa suuqa tikniyoolajiyadiisa sare. Furaha tiknoolajiyadaas oo dhan waxay ku saabsan tahay xakamaynta keenista dareeraha ee nidaamka. Disas ka dib ...
Dayactirka joogtada ah ee mashiinka barafka
Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho dayactirka maalin kasta ee mashiinka barafka, shanta qodob ee soo socdana waa in si taxaddar leh loo sameeyaa inta la isticmaalayo: 1. Haddii wasakh badani ku jirto biyaha ama tayada biyuhu adag tahay, waxay ku dhaafaysaa miisaanka uumiga baraf sameeyaha saxaarad muddo dheer, iyo t ...
Mabda'a shaqada mashiinka barafka II
Ⅱ. Kala-soocidda qaab-dhismeedka Sida ku xusan hababka kala-bixinta biyaha ee kala duwan, waxaa loo qaybin karaa saddex nooc: nooca buufinta, nooca quusin iyo nooca biyaha socda. Qaab dhismeedka mashiinka buufinta ayaa lagu muujiyey Jaantuska 3. Bamka biyaha ku buufiya biyaha uumi baxa sare, iyo saxanka barafka uumiga i ...
Mabda'a shaqada mashiinka barafka 1
Waa maxay mabda'a shaqada mashiinka barafka? Waxaa lagu qiyaasaa in qof walbaa uusan aqoon u lahayn dhibaatadan. Maqaalkani wuxuu sharxi doonaa mabda'a shaqada iyo socodsiinta mashiinka barafka si faahfaahsan oo leh shaxanka qaabeynta. Samee barafka waa nooc ka mid ah qalabka farsamada qaboojiyaha ee biyaha qaboojiya ...